Ku Bilaw Imtixaanka A / B 7daas Qodob | Martech Zone
Tijaabadu waxay sii wadaa in la cadeeyo iyada oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu sarreeya macnaheedu yahay in ganacsi kasta uu kordhiyo aragtiyada, qasabadaha iyo beddelaadda websaydhkooda. Dhisida a istaraatijiyad tijaabin waayo, boggaga soo degaya, ficil-ficil, Iyo email waa inuu ku jiraa jadwalka suuqgeyntaada.
Warka wanaagsan? Ku dhowaad wax kasta ayaa lagu tijaabin karaa is-hagaajin! Warka xun? Ku dhowaad wax kasta ayaa lagu tijaabin karaa wax-qabad. Laakiin boggayaga cusub ee macluumaadka ayaa ku tusaya meelo yar oo wanaagsan oo laga bilaabi karo.
Ku boodidda A / B Imtixaanka wuxuu noqon karaa mid cabsi leh, sidaa darteedQalabaynta waxay soosaartay boggan macluumaad si ay kaaga caawiso inaad bilowdo. Halkan waxaa ah 7 cunsur oo aad ku tijaabin karto bog kasta si aad uga caawiso kordhinta sicirka beddelaadda:
The cabirka sawirka bogga. Sawirro waaweyn ayaa lagu yaqaan inay kordhiyaan sicirka beddelashada si aad ah.
Adeegsiga xeelado looga saarayo tirada foomamka bogga soo degitaanka.
Ku darista fiidiyowga bogga. Waxaan ku dari lahaa in meesha laga saaro fiidiyowyada sifiican u horumarsan ayaa sidoo kale la cadeeyay inay kordhinayso beddelaadyada… hubi inaad tijaabiso.
Isticmaalka cinwaannada khasabka ah taas oo ku dhiirrigelisa akhristaha inuu gujiyo oo ka caawiyo inuu fahmo faa'iidooyinka dalabkaaga.
U wac Wicitaanka iyo Tijaabada Ad si loo wanaajiyo sicirka gujinta, oo ay ku jiraan cabirka, goobta, ereyada iyo qaabeynta badhamada.
The codka boggaIt ma tahay mid saaxiibtinimo, deg-deg ah, xirfadle ah, soo bandhigid, waxyeello leh? Qaabka aad uga sheekaynayso sheekadaada ayaa muhiim u ah natiijooyinka aad gaadhay.
The midabada la isticmaalay boggaaga. Ma ogtahay in buluuga uu yahay midabka aaminka iyo amniga, casaanka waa deg deg, oranjuna waa ficil, cagaarna waa nasanayaa… midabada ayaa leh saameyn ku saabsan dhaqanka iibsiga.
Tags: imtixaanka abwac talaabomidabkactaBadhanka CTAdhererka foomkaxirmocinwaankacinwaanadacabirka sawirkainfographicFiidiyowyada Suuqgeyntaimtixaankacodkabaaritaanka bogga